फेसएप निर्माताको दावी, ‘कुनै सुरक्षा खतरा छैन’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। नेपाललगायत विश्वभर भाइरल भएको एक एप फेसएप प्रयोगकर्ताहरुको सूचना चोरी हुने खबरहरु आइरहेका बेला सो एप निर्माता कम्पनी वायरलेस ल्याबले भने त्यस्तो कुनै जोखिम नरहेको बताएको छ ।
रसियन कम्पनीको पिटसबर्गस्थित कार्यालयले यो एप प्रयोग गर्नेहरुको कुनै पनि सूचना नलिइएको दावी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बीबीसीका अनुसार कम्पनीले प्रयोगकर्ताका तस्वीरहरु स्थायी रुपले स्टोरसमेत गरिएको छैन र अन्य निजी सूचनामा पहुँच पनि राखिएको छैन । साथै प्रयोगकर्ताले छनोट गरेको तस्वीरमात्र एडिट गरिएको छ ।
तन्नेरी अवस्थाको तस्वीरलाई बुडेउलीमा परिवर्तन गर्नेलगायतका विभिन्न सुविधा रहेको यो एप पछिल्ला केही दिनयता विश्वभर भाइरल भइरहेको छ । एप निर्माता कमपनी वायरलेस ल्याबले हाल आफ्ना ८ करोड प्रयोगकर्तामात्र भएको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकीहरुले भने यो एपका कारण प्रयोगकर्ताका सूचनाहरु चोरी भएको र अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । एकजना अमेरिकी सिनेटरले यो विषयमा छानविन गर्न अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरोलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । तर, फ्रान्सेली विज्ञहरुले भने यो एपबाट कुनै खतरा नरहेको दाबी गरेका छन् । अमेरिकीहरुले भने ज भए पनि यो एप प्रयोग गर्नुभन्दा नगरेकै राम्रो भनेर तर्क गरेका छन्।
अमेरिकीले यो एपबारे विवाद गर्नु रुससँगको सम्बन्ध पनि एक कारण रहेको बताइन्छ । रुस र अमेरिकाबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेकाले अमेरिकीहरु रुसप्रति अनुदार छन् । हालै टर्की रुसी प्रतिरक्षा प्रणाली एस–४०० खरिद गरेपछि पाँचौ जेनेरेशनका लडाकु विमान एफ–३५ टर्कीलाई नबेच्ने निर्णय गरेको थियो ।